ဒုရဲမှူးဟောင်း မိုးရန်နိုင်ကို ဦးရွှေမန်း ဦးဆောင်သည့် ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင် ပါတီမ? - Yangon Media Group
ဒုရဲမှူးဟောင်း မိုးရန်နိုင်ကို ဦးရွှေမန်း ဦးဆောင်သည့် ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင် ပါတီမ?
ဒုရဲမှူးဟောင်း မိုးရန်နိုင်ကို ဦးရွှေမန်းဦးဆောင် သည့် ပြည်ထောင်စု ကောင်းကျိုး ဆောင်ပါတီမှ ပါတီဝင်ရန်ကမ်း လှမ်းထားကြောင်း သိရသည်။ အကျဉ်းထောင်မှ လွတ် မြောက်ပြီးခါစက ပြည်ထောင်စု ကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ၊ စစ်ကိုင်း တိုင်းတာဝန်ခံမှတစ်ဆင့် လာ ရောက် ကမ်းလှမ်းထားခြင်းဖြစ် ကြောင်း ဦးမိုးရန်နိုင်က ဒီမိုက ရေစီတူဒေးသို့ ဧပြီ ၂၉ ရက်တွင် ပြောသည်။
”ဟုတ်ပါတယ်။ ထောင်က ထွက်လာခါစတုန်းကပါ။ ကြာတော့ ကြာပါပြီ”ဟု ဦးမိုးရန်နိုင်ကပြော သည်။ သို့သော်လည်း ပါတီသို့ဝင် ရောက်ရန်ရှိ၊ မရှိ မဆုံးဖြတ်ရသေး ကြောင်း၊ ¤င်းအနေဖြင့် နိုင်ငံ ရေးလောကသို့ ဝင်ရောက်ရန်စဉ်း စားနေကြောင်း မီဒီယာများသို့ ပြောကြားထားသည်။ အဆိုပါ ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင် ပါတီတာဝန်ရှိသူအချို့သို့ ဖုန်း ဆက် မေးမြန်းသော်လည်းအတည် မပြုကြပေ။ ပြည်ထောင်စုကောင်း ကျိုးဆောင်ပါတီအနေဖြင့် အမှန် တကယ် ကမ်းလှမ်းထားခြင်းရှိ၊ မရှိ ပါတီတည်ထောင်သူတစ်ဦး ဖြစ်သည့် ဦးဝင်းဦးကို ဒီမိုကရေ စီတူဒေးမှ ဖုန်းဆက်မေးမြန်းရာ နယ်ရောက်နေသဖြင့် အဆိုပါ သတင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဟုတ်၊ မဟုတ် အတည်မပြုပေးနိုင်ကြောင်း ¤င်းက ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။
ယင်းအပြင် ပါတီတာဝန်ရှိ သူတစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးတင်မောင် ဦးထံ ဖုန်းဆက်မေးမြန်းရာ မှန်၊ မမှန် အတည်မပြုနိုင်သော်လည်း အဆိုပါသတင်းမှာ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။ ”လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပဲထင် တယ်။ ငါကတော့”ဟု ၎င်းကပြော သည်။ ဒုရဲမှူးဟောင်းမိုးရန်နိုင် သည် ရိုက်တာသတင်းသမားနှစ်ဦး အမှု၌ ¤င်းတို့နှစ်ဦးကို ထောင် ချောက်ဆင်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရခြင်းဖြစ် ကြောင်း တရားခွင်တွင် ထွက်ဆိုခဲ့ ပြီးနောက် ထောင်ချခံခဲ့ရသူဖြစ်ပြီး မကြာသေးမီကမှ ပြန်လည်လွတ် မြောက်လာသူဖြစ်သည်။
အော်စကာဆု ရရှိမယ့် ရုပ်ရှင်မှာ သရုပ်ဆောင်ရဖို့ လွဲချော်လုနီးပါး ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ဂျန်နီဖာလောရ?
ရီးရဲလ်အသင်းနှင့် သက်တမ်းတိုးလိုကြောင်း မိုဒရစ် ဖွင့်ဟ
အမာမြို့နယ်အတွင်း ထူးကဲဒီရေပိုမိုမြင့်တက်လာ၍ လူနေအိမ် ၃ လုံး ပြိုကျပျက်စီးခဲ့
ဆူဒန်တွင် ပေါက်ကွဲမှု တစ်ခုကြောင့် ကလေးငယ် ၂ ဦးသေဆုံး၊ လူ ၅၀ ဦး ဒဏ်ရာရရှိ
ရွှေကူမြို့ထွက် သောက်ရေအိုးများ မန္တလေးနှင့် ကချင်ပြည်နယ်ဈေးကွက်သို့ တွင်ကျယ်စွာရောင်းချ??